Tamin'ny vanim-potoanan'ny vanim-potoana, ny fikarohana ara-tsosialy indrindra dia nanana fari-pahaizana maherin'ny voafetra ary niasa tao anatin'ny fitsipika mazava tsara. Ny fikarohana ara-tsosialy amin'ny vanim-potoana nomerika dia hafa. Ireo mpikaroka - matetika amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa sy ny governemanta - dia manana fahefana bebe kokoa noho ny tamin'ny taloha, ary ny fitsipika momba ny fomba tokony hampiasana io hery io dia mbola tsy mazava. Amin'ny fahefana dia midika fotsiny hoe fahafahana manao zavatra amin'ny olona tsy misy ny faneken'izy ireo na ny fanentanana akory aza. Ny karazan'asa azon'ny mpikaroka atao dia ny mitandrina ny fitondran-tenany ary mampiditra azy ireo amin'ny fanandramana. Koa satria mihamitombo ny herin'ny mpikaroka hitazona sy hikorontan-tsaina, dia tsy nisy fitomboana mitovy amin'ny fampiasana azy io. Raha ny marina, ny mpikaroka dia tsy maintsy manapa-kevitra ny fomba hampiharana ny fahefany amin'ny alàlan'ny fitsipika sy lalàna ary fitsipika mifanohitra sy mifanohitra. Io fitambarana fahaiza-manao matanjaka io sy ny torolàlana manjavozavo dia miteraka toe-javatra sarotra.
Ny hery iray izay azon'ny mpikaroka amin'izao fotoana izao dia ny fahafahana mitandrina ny fitondran-tenan'ny olona raha tsy manaiky na manaiky izany izy ireo. Ny mpikaroka dia afaka manao izany, mazava ho azy, manao izany amin'ny lasa, fa amin'ny vanim-potoana nomerika, ny fahasamihafana dia tena samihafa, zava-misy izay naverimberin'ny maro mpankafy loharanom-baovao lehibe. Amin'ny ankapobeny, raha miala amin'ny haavon'ny mpianatra tsirairay na ny mpampianatra isika ary mihevitra ny fomban'ny orinasa iray na ny orinasam-panjakana izay ahitan'ny mpikaroka miara-miasa - dia lasa sarotra ny olana ara-etika. Ny fampitahana iray izay heveriko fa manampy ny olona hampiseho ny hevitra momba ny fanarahamaso ny masinina dia ny panopticon . Voalohany natolotr'i Jeremy Bentham ho fananganana fonja ho an'ny fonja, ny panopticon dia trano boribory misy sela niorina manodidina ny tilikambo fiambenana avo iray (6.3). Izay rehetra mijery ity tilikambo ity dia afaka mitandrina ny fitondrantenan'ny olona rehetra ao amin'ny efitrano tsy hita maso. Ny olona ao amin'ny tilikambo dia mpandinika tsy hita maso (Foucault 1995) . Ho an'ireo mpisolovava tsy miankina sasany, ny taona nomerika dia nanosika anay ho any amin'ny fonjan'i panoptic izay ahafahan'ny orinasam-panjakana sy ny governemanta mijery tsy tapaka sy manitsy ny fitondrantenanay.
Sary 6.3: Famolavolana ny fonction Panopticon, voalohany navoakan'i Jeremy Bentham. Ao afovoan-tanàna, misy mpijery tsy hita maso afaka mitandrina ny fitondran-tenan'ny olon-drehetra saingy tsy azo tsidihana. Sarin'i Willey Reveley, 1791 (Loharano: Wikimedia Commons ).
Mba hitazonana bebe kokoa ity metafôra ity, rehefa mieritreritra ny taona niomerika ny mpikaroka ara-tsosialy marobe, mieritreritra izy ireo ao anaty tilikambo, mandinika ny fitondran-tena ary mamorona tahiry maoderina izay azo ampiasaina hanao fikarohana karazana fikarohana sy manan-danja. Fa ankehitriny, fa tsy mieritreritra ny tenanao ao amin'ny tilikambo, dia alao sary an-tsaina ny iray amin'ireo sela. Ny tahirim-bolam-panjakana dia manomboka mihevitra fa i Paul Ohm (2010) dia nantsoina fananganana antontan-kevitra momba ny faharavana , izay azo ampiasaina amin'ny fomba tsy miangatra.
Ny mpamaky sasany amin'ity boky ity dia tsara vintana hiaina any amin'ireo firenena izay itokisany ireo mpahita tsy hita maso hampiasa ny angon-draketrany ary hiaro azy amin'ny fahavalo. Ny mpamaky hafa dia tsy tsara vintana, ary azoko antoka fa ny olana ateraky ny fanarahamaso ny masony dia mazava ho azy ireo. Saingy mino aho fa na dia ho an'ireo mpamaky vintana aza dia mbola zava-dehibe ny fanaraha-maso ny fanaraha-maso betsaka: fampiasana tsy an-kiato ny fampiasana faharoa . Izany hoe, tahirin-tserasera noforonina ho an'ny tanjona tokana iray-milaza ny dokam-barotra mitaiza-mety indray andro iray hampiasaina amin'ny tanjona hafa. Ohatra iray mampihoron-koditra ny fampiasana fampiasa an-tsokosoko hafa izay nitranga nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, raha nampiasaina ny angon-drakitra nataon'ny governemanta mba hanamorana ny fandripahana foko natao tamin'ny Jiosy, Roma ary ny hafa (Seltzer and Anderson 2008) . Ireo mpanao fanatanjahan-tena izay nanangona ny angon-drakitra nandritra ny fotoanan'ny fandriam-pahalemana dia azo antoka fa nanana fikasana tsara, ary maro ireo olom-pirenena no natoky azy ireo hampiasa ny angona azo antoka. Kanefa, rehefa niova ny tontolo-rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny Nazia-dia nampiasa fampiasana faharoa izay tsy nomanina mihitsy ireo tahiry ireo. Raha atao tsotra izao, raha vao misy ny fotodrafitrasa maoderina, dia sarotra ny miandry izay mety hahazoana azy io sy ny fomba hampiasana azy. Raha ny marina, William Seltzer sy Margo Anderson (2008) dia nanadihady tranga 18 izay nahitana ireo rafitra momba ny angona fanangonam-peo na tafiditra amin'ny fanararaotana ny zon'olombelona (tabilao 6.1). Ankoatra izany, araka ny nanamarihan'i Seltzer sy Anderson, ity lisitra ity dia azo antoka fa tena ambany indrindra satria ny ankamaroan'ny fanararaotana dia miseho miafina.
Tabilao 6.1: Fahaizana mifandraika amin'ny fandrakofam-pejam-pifaneranan-monina na fampidirana am-ponja ny zon'olombelona. Jereo ny Seltzer sy Anderson (2008) raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny fepetra rehetra sy ny fepetra fampidirana. Ny sasany, fa tsy ny rehetra, dia nahakasika ny fampiasana faharoa tsy nampoizina.
Olona na vondron'olona voatokana
Fanitsakitsahana ny zon'olombelona na fikasana hisian'ny fanjakana
Aostralia Taonjato faha-19 sy fiandohan'ny taonjato faha-20 Aborigines Fanoratana ny mponina Ny fifindra-monina mifamatotra, singa famonoana
Shina 1966-76 Siansa ratsy eo anivon'ny revolisiona ara-kolontsaina Fanoratana ny mponina Fifindrà-tena tafahoatra, herisetra anjakan'ny vahoaka
Frantsa 1940-44 Jiosy Fanoratana ny mponina, fanisam-bahoaka manokana Fifindra-monina an-tery, famonoana
Alemaina 1933-45 Jiosy, Roma, ary ny hafa maro Fifindra-monina an-tery, famonoana
Hongria 1945-46 Olom-pirenena alemà sy ireo mpampita vaovao amin'ny teny alemana 1941 mponina Fifindra-monina
Pays-Bas 1940-44 Jiosy sy Roma Ny rafitra fanoratana ny mponina Fifindra-monina an-tery, famonoana
Norvezy 1845-1930 Samis sy Kvens Ny fanisam-bahoaka Ethnic cleansing
Norvezy 1942-44 Jiosy Fanisam-bahoaka manokana sy antontan-taratasin'ny mponina famonoana Ny Mpiray Tanindrazana
Polonina 1939-43 Jiosy Famaranana manokana indrindra famonoana Ny Mpiray Tanindrazana
Romania 1941-43 Jiosy sy Roma 1941 mponina Fifindra-monina an-tery, famonoana
Rwanda 1994 Tutsi Fanoratana ny mponina famonoana Ny Mpiray Tanindrazana
Afrika Atsimo 1950-93 Afrikana sy ny "Colored" populations 1951 ny fanisam-bahoaka sy ny fisoratana anarana ho an'ny mponina Apartheid, fifidianana tsy voafidy
Etazonia Taonjato faha-19 Indian Americans Fanisam-bahoaka manokana, rejisitry ny mponina Fifindra-monina
Etazonia 1917 Mpandika lalàna mandika lalàna Fanisam-bahoaka 1910 Famotopotorana sy fanenjehana ireo izay misoroka ny fisoratana anarana
Etazonia 1941-45 Japoney Amerikanina 1940 Fifindrà-monina ary fifindra-monina
Etazonia 2001-08 Mpanao fampihorohoroana Ny fanadihadihana sy ny angona momba ny fitantanana Famotopotorana sy fanenjehana mpampihorohoro an-tanindrazana sy iraisam-pirenena
Etazonia 2003 Arabo-Amerikana Fanisam-bahoaka 2000 Unknown
Firaisana Sovietika 1919-39 Mponina vitsy an'isa Fihetseham-bahoaka maro Fifindrà-tena tafahoatra, fanasaziana heloka bevava hafa
Ireo mpikaroka ara-tsosialy tsotra dia tena, tsy misy zavatra toy ny fandraisana anjara amin'ny fanararaotana ny zon'olombelona amin'ny alalan'ny fampiasana faharoa. Nifidy ny hiresaka izany anefa aho, satria mieritreritra aho fa hanampy anao hahatakatra ny mety ho fihetsiky ny olona sasany amin'ny asanao izany. Andao hiverina amin'ny tweets, ny teboka, ary ny tetikasa, ho ohatra. Amin'ny fampifangaroana ny angon-drakitra manontolo sy granulaire avy amin'ny Facebook miaraka amin'ny angon-drakitra feno sy granulaire avy ao Harvard, ireo mpikaroka dia namorona fomba fijery mahavariana momba ny fiainana ara-tsosialy sy ara-kolotsainan'ireo mpianatra (Lewis et al. 2008) . Ho an'ireo mpikaroka ara-tsosialy marobe, dia toa ny tahiry fototra, izay azo ampiasaina ho tsara. Saingy ho an'ny sasany, dia toa ny fiandohan'ny datin'ny faharavana, izay azo ampiasaina tsy misy dikany. Raha ny marina dia mety ho kely ny azy roa.
Ankoatra ny fanaraha-mason'ny masomboly, ireo mpikaroka - amin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa sy ny governemanta - dia afaka miditra lalina eo amin'ny fiainan'ny olona mba hamoronana fanandramana mifehy tsy tapaka. Ohatra, ao anatin'ny fifamatorana ara-pihetseham-po, ny mpikaroka dia nanoratra olona 700.000 tamin'ny alalan'ny fanandramana raha tsy nanaiky na nahatsiaro. Araka ny voalazako ao amin'ny toko faha-4, io karazana fitakiana miafina amin'ny mpandray anjara io ho fanandramana dia tsy mahazatra, ary tsy mitaky ny fiarahan'ny orinasa lehibe izany. Raha ny marina, ao amin'ny toko faha-4 dia nampianatra anao ny fomba hanaovana izany aho.
Manoloana izany hery matanjaka izany, ireo mpikaroka dia iharan'ny fitsipika, lalàna, ary fitsipika tsy mifanaraka . Ny loharanom-baovao iray dia ny fiovaovan'ny vanim-potoana nomerika dia miova haingana kokoa noho ny lalàna, lalàna, ary fitsipika. Ohatra, ny Common Rule (ny fitsipika mifehy ny fikarohana ara-bola indrindra any Etazonia) dia tsy niova betsaka nanomboka tamin'ny taona 1981. Ny loharanom-baovao tsy mitombina dia ny fombafomba manodidina ny hevitra mifono hevitra toy ny tsiambaratelo dia mbola miady hevitra mafy amin'ny mpikaroka , mpanao politika, ary mpikatroka. Raha toa ny manam-pahaizana any amin'ireny faritra ireny dia tsy mahatratra ny fifanarahana iraisam-pirenena, dia tsy tokony hanantena isika fa ny mpikaroka sy ny mpandray anjara dia tokony hanao izany. Ny loharanom-pahatokisana fahatelo sy farany dia ny fikarohana dizitaly dia mihamitombo hatrany amin'ny toe-javatra hafa, izay mitarika ny fitsipika sy fepetra mety hitranga. Ohatra, ny Emotional Contagion dia fiaraha-miasa eo amin'ny mpahay siansa ao amin'ny Facebook ary profesora sy mpianatra mpianatra any Cornell. Tamin'izany fotoana izany, dia nahazatra tao amin'ny Facebook ny fametrahana fanandramana goavana tsy misy mpiandraikitra antoko fahatelo, raha toa ka nanaiky ny fepetra Facebook an'ny serivisy ny fanandramana. Ao Cornell, ny fitsipika sy fitsipika dia hafa tanteraka; Ny fanandramana rehetra dia tsy maintsy dinihan'ny Cornell IRB. Noho izany, iza no fitsipika tokony hifehy ny fifandraisana ara-pihetsehampo-Facebook na Cornell? Rehefa misy fitsipika mifanohitra sy mifanohitra amin'ny lalàna, ny lalàna sy ny fitsipi-pandrefesana dia mety hanana olana amin'ny fanaovana fikarohana ny mpikaroka. Raha ny marina, noho ny tsy fitovian-kevitra dia mety tsy hisy na dia zavatra iray aza.
Amin'ny ankapobeny, ireo singa roa ireo-ny fampitomboana ny hery sy ny tsy fisian'ny fifanarahana momba ny fomba tokony hampiasana an'io fahefana io-dia midika fa ireo mpikaroka miasa amin'ny vanim-potoana nomerika dia hiatrika fanamby ara-pihetseham-po ho an'ny hoavy azo jerena. Soa ihany, rehefa miatrika ireo fanamby ireo dia tsy ilaina ny manomboka amin'ny scratch. Ny mpikaroka kosa dia afaka mampihatra ny fahendrena avy amin'ny fitsipika sy rafitra efa napetraka teo aloha, ny lohahevitry ny fizarana roa manaraka.